ဆရာဦဇော်လင်း၏လင်နစ်အခြေခံအသုံးပြုနည်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
31-12-2011, 10:32 PM
ဒီစာအုပ်လေးကဆရာဦးဇော်လင်းရဲ့ လင်နစ်မိတ်ဆက်နဲ လင်နစ်အခြေခ့မသုံးပြုနည်းစာအုပ်ပါ(ဒီစာအုပ်မှာREDHAT/FEDDORA/UBUNTUတို့ ကိုအ
လူတောင်ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးရင်လင်နစ်ဆိုတာဘာလဲDESTOP VERSION ကဘာလဲ server verionကဘာလဲဆိုတာကို
Last edited by thureinsoe; 10-01-2012 at 12:59 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 25 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
!!phyowai!!, ကိုကြီးထွန်း, နီထွန်းဦး, မိုးကောင်းကင်, မျိုးဟန်ထက်, လမ်းပြကြယ်, သက်တန့်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, bagothar85, g00gle, khoungchee, minnthu, minthumon, mr.jittwo, PyaitSone, Swann Linn Htet, Ye Aung, yelinoo, yoeyoeaung, ZAW KAUNG LAY, Zin Ko, zo
ပို့စ် 35 ခုအတွက် 112 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ဆရာဦဇော်လင်း၏လင်နစ်အခြေခံအသု&#
ဆရာဦးဇော်လင်းရေးထားတဲ့ ccna စာအုပ်ထွက်တယ်လို့ ကြားပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Zin Ko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ZAW KAUNG LAY, zo
Zin Ko ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Zin Ko
ပို့စ် 185 ခုအတွက် 1,886 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
စာအုပ်က ifile.it ကနေ ဒေါင်းလုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ ။ ဒေါင်းလုပ်လို့ရမဲ့ လင့်ခ်လေး တချက်လောက် ပြန်ပေးပါလားဗျ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ရုပ်ဆိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
minthumon, ZAW KAUNG LAY, zo
Find More Posts by ရုပ်ဆိုး
ပြန်စာ - ဆရာဦဇော်လင်း၏လင်နစ်အခြေခံအသု&a
Originally Posted by ရုပ်ဆိုး
Last edited by thureinsoe; 28-01-2012 at 06:47 PM..
ရုပ်ဆိုး, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, asulike88, bagothar85, g00gle, minthumon, putty, yoeyoeaung, zo
27-02-2012, 06:14 AM
ပို့စ်9ခုအတွက် 48 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တစ်ခုခု လုပ်ပေးကြပါလားဗျာ ကျွန်တော် ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့မရလို့ပါ
လင့်ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဘာမှမပေါ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် upload your browser start လို့ပဲပေါ်ပေါ်နေတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ kyaylatt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကောင်းထက်ဦး, minthumon, zo
Find More Posts by kyaylatt
27-02-2012, 07:50 AM
ပြန်စာ - ဆရာဦဇော်လင်း၏လင်နစ်အခြေခံအသု&a
Originally Posted by kyaylatt
လင့်ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဘာမှမပေါ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် upload your browser start လို့ပဲပေါ်ပေါ်နေတယ်
ဒီနေရာမှာ Linux3in 1 (ဦးဇော်လင်း) အပါအဝင် မြန်မာလိုစာအုပ် တော်တော်များများကို တင်ပေးထားတာ တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာ....အဲဒီမှာ တင်ပေးထားတဲ့ လင့်တွေဟာ Direct Download လို့ရပါတယ်။ လင့်တွေလည်း မသေပါဘူး။ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ စာအုပ်တွေကို Share ချင်သေးယင်လည်း အဲဒီမှာ Upload တင်ပြီး Share လို့ရပါသေးတယ်။ Linux3in 1 ရဲ့ Direct Download Link ကတော့ ဒါကိုနှိပ်ပါ ခင်ဗျာ... အဆင်ပြေပါစေအစ်ကို....
မျိုးဟန်ထက်, ရုပ်ဆိုး, မောင်ပေါ်ဦး, လေထန်, azp09, g00gle, Ko-Naing, lazyguylay, minthumon, moe_poung, nyilinnge, sayarchan, ZAW KAUNG LAY, zo
25-04-2012, 05:51 PM
Last edited by blackfire; 25-04-2012 at 06:06 PM..
26-06-2012, 06:59 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jun 2012
passwordထည့်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်ဟာကိုထည့်ရမလဲဆိုတာပြောပေးပါဦး။ ပြီးတော့တစ်ခုမေးချင်တာက တစ်ခုခုတင်တဲ့အခါ ဘာလို့passwordပေးထားကြတာလဲဟင်။ မပေးလို့မရဘူးလား။ တစ်ခုခုဖွင့်ချင်ရင် အဲ့ဒီဟာဖြည့်ရတာနဲ့အလုပ်ရှု့ပ်တယ်ထင်မိလို့ပါ။
ရှင်းပြပေးပါနော်။ တူတူဘဲမို့လို့ ကော်ပီလိုက်ပီ :D
Last edited by Aung Aung; 22-09-2014 at 01:37 PM.. Reason: spacing
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kaung htet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kaung htet ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by kaung htet
27-06-2012, 06:07 AM
password မထည့်တော့ပဲ ... mediafire ကနေ ပြန်တင်ထားပါတယ်။
password ဘာကြောင့်ထည့်တယ်ဆုိုတာကို ဒီနေ၇ာမာ အမတူးတူးက ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်စင်တာ၇ဲ.စည်းကမ်းချက်များ ကိုလဲ ၀င်ေ၇ာက်ဖတ်ရှုပေးစေလိုပါတယ်။
ဦးဇော်လင်း လင်းနစ် (mediafire)
ဇာနည်စိုး, လမ်းပြကြယ်, စောလွင်, လေထန်, အောင်ငြိမ်းချမ်းဇော်, အေးဝတ်မှုန်, arkaraung, bagothar85, g00gle, kozaw.dagon, nyilinnge, runner.zaw, tu tu, ZAW KAUNG LAY
ပို့စ် 13 ခုအတွက် 24 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လင်းနစ်ကို အခုမှလေ့လာခြင်သူငယ်ချင်းအတွက်လိုက်ရှာနေတာ ဒေါင်းလိုအဆင်ပြေသွားပါပြီး မြန်မာမိသားစုကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Find More Posts by စောလွင်
20-05-2015, 10:40 AM
Aye Myo KO
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: May 2015
Thank you very much Bro.If u have another ebook (MCSA,CCNA). Please give share .
Aye Myo KO ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Aye Myo KO
25-02-2017, 09:30 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Feb 2017
မိသားစုအသစ်ပါ ဆရာ၊ဆရာမ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ လင်းနစ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ခုမှစလေ့လာတာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Find More Posts by heinhtetaung.aung
fedora, linux ebooks